राजपाका पक्षमा बढ्दै परिणाम- स्थानीय निर्वाचन २०७४ - कान्तिपुर समाचार
राजपाका पक्षमा बढ्दै परिणाम
आश्विन ९, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
धनुषा — जनकपुर उपमहानगरपालिकाका दुवै मुख्य पद राजपाको पोल्टामा गएको छ । प्रतिद्वन्द्वीलाई ठूलो मतान्तरले हराउँदै लालकिशोर साह मेयर चुनिए । उपप्रमुखमा पनि सोही पार्टीकी रीता झा निर्वाचित भएकी छन् ।
साहले २१ हजार ९ सय ३ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका मनोज साहले ११ हजार १ सय ६४ मत मात्र पाए । झाले १७ हजार १ सय ४७ मत ल्याइन् ।
जनकपुरका २५ वडामध्ये १२ वटामा राजपा, ७ वटामा कांग्रेस, ३ वटामा संघीय समाजवादी फोरम, २ वटामा एमाले र एउटा वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवार अध्यक्षचुनिएका छन् ।
मेयरमा विजयी साहले नगरको सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए । ‘यो राजपाको होइन, आमजनताको जित हो,’ उनले भने, ‘जनकपुरमा मधेस मुद्दाको जित भएको हो ।’ २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाट बागी उठेका उनी उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए ।
महोत्तरी जिल्लाका पिपरा गाउँपालिका र मनरा सिसवा नगरपालिकाको नेतृत्व राजपाले गर्ने भएको छ । आइतबार घोषित परिणामअनुसार पिपरामा विनोदकुमार चौधरी अध्यक्ष चुनिएका छन् । उनले ४२३९ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका विक्रम चौधरीले १८१७ मत मात्र पाए । उपप्रमुखमा राजपाकै ननुकुमारी दास २५७३ मतसहित विजयी भइन् ।
त्यस्तै मनरा सिसवा नगरपालिकामा राजपाका सञ्जयकुमार सिंह २७७५ मत ल्याएर मेयर चुनिए । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी संघीय समाजवादी फोरमका महेन्द्र रायले ३२६१ मत पाए । उपप्रमुखमा पनि रजपाकै रमिता प्रधान ४०५३ मतसहित विजयी भइन् । जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये राजपाले सबैभन्दा बढी ७, माओवादी केन्द्रले ४, कांग्रेसले ३ र संघीय समाजवादी फोरमले १ स्थान जितेका छन् ।
सर्लाहीका ६ तहमा राजपा
सर्लाहीका सबै २० तहको मतगणना सम्पन्न भएको छ । आइतबार टुंगिएको मतगणनाअनुसार राजपाले ६ तह, कांग्रेसले ५ तह, एमालेले ४ तह, माओवादीले ३ तह, संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले १/१ स्थानमा प्रमुख जितेका छन् । उपप्रमुखमा भने राजपाले ७ र संघीय फोरमले २ स्थानमा जित हात पारे ।
पछिल्ला ५ स्थानको परिणाममा एमाले २, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र राजपा १/१ स्थानमा विजयी भएका छन् । अन्तिममा गणना सकिएको कविलासी नगरपालिकामा राजपाका उम्मेदवार कौशलकिशोर यादव मेयरमा विजयी भएका हुन् । संघीय समाजवादी फोरमका ब्रह्मदेव राय उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी भए । उपमेयरमा भने राजपाकी रामकुमारी देवीलाई पराजित गर्दै फोरमकी राधादेवी विजयी भइन् । सदरमुकाम रहेको मलंगवा नगरपालिकामा कांग्रेसका निरसल साह विजयी बने । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी स्वतन्त्र उम्मेदवार नागेन्द्रप्रसाद यादव रहे । राजपाका उम्मेदवार नागेश्वर राय यादव तेस्रोमा सीमित भए ।
उमपेयरमा कांग्रेसकै सवनम मिकरानी विजयी बनिन् । त्यसैगरी ईश्वरपुर नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका मनोज देवकोटा विजयी भए । माओवादी केन्द्रका जयप्रकाश चौधरी उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थिए । उपमेयरमा एमालेकै एकादशीदेवी चौधरी विजयी बनिन् । हरिपुर नगरपालिकामा पनि एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । मेयरमा जमरुद्धिन मन्सुर विजयी बने । कांग्रेसका उदयनारायण चौधरी दोस्रो स्थानमा रहे । उपमेयरमा एमालेकै रेणुदेवी काफ्लेले जित हासिल गरिन् ।
बरहथवा नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका देवानन्द महतो मेयरमा विजयी भएका छन् । उनलाई कांग्रेसका निरञ्जनप्रसाद दासले पछ्याएका थिए । उपमेयरमा केन्द्रकै सीतादेवी माझीले जित हासिल गरिन् । उनलाई कांग्रेसकी यशोदादेवी निरौलाले पछ्याएकी थिइन् ।
प्रकाशित : आश्विन ९, २०७४ ०८:३५
आफूखुसी नाम फेर्दै जनप्रतिनिधि
हाम्रा स्थानीय तह
रोल्पा — माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित निमकान्त डाँगी ‘जितजङ’ ले दुईखोली गाउँपालिकाको नाम फेर्ने निर्णय पारित गराए । गाउँसभामार्फत दुईखोलीको नयाँ नाम ‘परिवर्तन’ राख्ने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाइने भएको छ ।
साबिकका इरिबाङ, पाछाबाङ, कुरेली, राङ्सी र राङकोट गाविसलाई गाभेर बनाइएको दुईखोली गाउँपालिकाको नाम इरिबाङ घर भएका तत्कालीन माओवादी लडाकु नेपबहादुर केसी ‘परिवर्तन’ को स्मृतिमा राख्ने गाउँसभाले निर्णय गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष डाँगीले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका सहिदको सम्मानस्वरूप गाउँपालिकाको नाम राखिएको बताए । तत्कालीन माओवादी लडाकुका कमान्डर ‘परिवर्तन’ ले लडाइँको अवधिमा कपिलवस्तुस्थित जंगलमा आन्तरिक विस्फोटमा परी ज्यान गुमाएका थिए ।
गाउँपालिकाका ६ वटै वडामा माओवादी केन्द्रकै प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । अन्य दलका प्रतिनिधिले सर्वदलीय छलफल नै नगरी मृतकका नाउँमा गाउँपालिकाको नाम राख्न प्रस्ताव अमान्य भएको बताएका छन् ।
यसैगरी सुवर्णावती गाउँपालिकाको नाम फेर्नेबारे छलफल सुरु भएको छ । मिझिङ, अरेश, तेबाङ, खुंग्री, घोडागाउँ, गजुललगायतका गाविसलाई गाभेर बनाइएको सुवर्णावती गाउँपालिकाको नाम गजुल घर भएका माओवादी लडाकुका तत्कालीन कमान्डर किमबहादुर थापा ‘सुनील’ को स्मृतिमा फेर्ने तयारी गरिएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीमगरले प्रथम गाउँसभामा यसबारे प्रस्ताव ल्याउन खोजे पनि विपक्षी दलले विरोध गरेकाले फिर्ता लिएका थिए ।
‘यस क्षेत्रमा सहिद भएकामध्येमा सुनील उच्च तहका हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँकै स्मृतिमा गाउँपालिकाको नाम राख्ने प्रस्ताव गरेका हौं,’ भदौ अन्तिममा आयोजित प्रथम गाउँसभामा अध्यक्ष घर्तीले भनेका थिए, ‘यसमा विपक्षीले विकल्प नदिए हुन्छ ।’ यस गाउँपालिकाका कतिपय वडामा कांग्रेसका प्रतिनिधिले जितेकाले यस विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुन सकेको छैन ।
कांग्रेसका तर्फबाट वडा नं. ४ बाट निर्वाचित अध्यक्ष गञ्जबहादुर क्षत्री महराले आफ्नो पक्षबाट यस विषयमा निर्णय गर्न नदिने बताए । ‘जबरजस्ती गरे अर्कै कुरा हो तर सहमतिमा यो निर्णय हुन दिन्नौं,’ उनले भने । व्यक्तिको नाममा गाउँपालिकाको नाम राख्न नहुने तर्क स्थानीयले गरेका छन् । राज्यले ‘सुनील’ र ‘परिवर्तन’ लाई ‘सहिद’ घोषित गरेको छैन । त्यस क्षेत्रबाट द्वन्द्वको अवधिमा मारिएका अन्य कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले युद्धमै मारिएका आफ्ना परिवारका सदस्यमाथि ठूलो अपमान भएको गुनासो गरेका छन् ।
यसैबीच माडी गाउँपालिकास्थित जनप्रतिनिधिले घर्तीगाउँका क्रिश्चियन धर्मावलम्बीलाई केन्द्रित गरेर लाखौं बजेट विनियोजन गरेका छन् । चर्च निर्माण, चर्चसम्म पुग्न सडक निर्माण तथा उनीहरूको प्रचारमा सघाउ पुर्‍याउन माडी गाउँपालिका सभाले बजेट छुट्याएपछि स्थानीय तहमा विरोध सुरु भएको छ । उक्त गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले जितेका छन् ।
सडक नामकरणमा आपत्ति
सिन्धुपाल्चोक– ग्रामीण सडकको नामकरणप्रति असहमति जनाउँदै सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाअन्तर्गतको माझीरुम्टी, टार, लेखर्क, गुन्सा हुँदै रैथाने जाने सडकको नाम ‘सहिद युक्तिबहादुर मार्ग’ राखिएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका कार्यकर्ताले गाउँपालिका घेरेर विरोध गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाले द्वन्द्वकालमा माओवादी कार्यकर्ताले हत्या गरेका एमाले कार्यकर्ता युक्तबहादुर अधिकारीको नाममा सडकको नाम राख्ने निर्णय गरेको थियो । युक्तबहादुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुनीता अधिकारीका पति हुन् । कांग्रेस कार्यकर्ता कालिका गोलेले एकलौटी निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए । एमालेबाहेक सबै दलका कार्यकर्ताको संयुक्त जुलुसले गाउँ परिक्रमा गरेको थियो ।
कालो झन्डासहित प्रदर्शनमा उत्रेका दलका कार्यकर्ताले उक्त सडकको नाम च्यो–च्यो मार्ग राख्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । स्थानीय माओवादी कार्यकर्ता देवबहादुर थिङले गाउँका मुख्य सडक ४ लेन र शाखा सडक २ लेन बनाउने निर्णयमा पनि आफ्नो पार्टीको आपत्ति रहेको बताए । ‘मापदण्डअनुसार सडकको चौडाइ घटाइएको छ,’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्रका वडाध्यक्षले सिलिन्डर मागे
विकास बजेटबाट कटौती हुने वडा नम्बर ८ र ९ का अध्यक्षले विपन्न र सीमावर्ती क्षेत्रका महिलाका लागि ग्यास सिलिन्डरको प्रस्ताव गरेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले निर्वाचनको समय ग्यास सिलिन्डर दिने वाचा गरेका थिए । वडा नम्बर ८ मा १ हजार १ सय घरधुरी र ९ मा २ हजारभन्दा बढी घरधुरी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । वडाध्यक्ष हरिप्रसाद पासीले सीमावर्ती भारतीय जंगलबाट दाउरा बोकेर ल्याउँदा महिलाले निकै सास्ती भोग्नुपरेको र न्यून आयका महिलाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन प्रस्ताव गरिएको बताए ।
महिलाको माग ‘मदिरा निषेध’
स्वराड (बैतडी)– जनप्रतिनिधिसमक्ष दुर्गमका महिलाको माग के होला ? सहजै अनुमान गर्ने कुरा विकास र सुविधा नै हो । तर, तल्लोस्वराड क्षेत्रका महिलाको माग भने बेग्लै छ । उनीहरूको प्रमुख माग
आफ्नो गाउँबस्ती मदिरा निषेध गरिनुपर्ने छ । महिलाहरूले मदिरा बेचबिखन बन्द गर्न माग गर्दै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई गुहारेका छन् ।
मेलौली नगरपालिका, पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकाका महिलाहरू यतिबेला मदिरा निषेधको अभियानमा जुटेका छन् । गाउँमा जथाभाबी मदिरा बिक्री र सेवनले आफूहरू पीडित भएको उनीहरूले बताए । गाउँमा आयोजना हुने सबैजसो बैठक र सभामा उपस्थित महिलाहरू मदिरा निषेध गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
विकासभन्दा पहिले मदिरा बन्द गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए । ‘सधैं बेचबिखन र सेवन व्यवस्थित गर्न माग गर्दै आयौं, समस्या बढ्दै जाँदा निषेधको माग गरेका हौं,’ शिवनाथ–५ उदयदेवकी काली साउदले भनिन्, ‘मदिराले घर, समाजमा झगडा र किचलो बढेको छ, धनसम्पत्ति र गरगहना सकिएको पत्तो हुँदैन, अन्य विकास पुगेर के गर्ने ?’
मदिराकै कारण परिवार र समाजमा झगडा र विवाद बढाएको स्थानीयको गुनासो छ । बाटोछेउको खेतबारीमा खाली सीसी फालेर घाँस काट्नसमेत समस्या भएको महिलाले बताए । पुरुष मदिरा सेवन गरी काममा नसघाउने, महिला र बालबालिकामा हिंसा गर्ने, धनसम्पत्ति उडाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
मदिराले महिला र बालबालिकामाथि यातना र कुटपिट, गालीगलौज, दुव्र्यवहार बढाएको पञ्चेश्वर–२ महाकालीकी धना औजीले बताइन् । स्वराड क्षेत्रका १ नगरपालिका र २ गाउँपालिकामा ७० पसलले मदिरा बेच्ने अनुमति लिएका छन् । शिवनाथमा ३०, मेलौलीमा २३ र पञ्चेश्वरमा १७ फर्मले मदिरा बिक्रीको अनुमति लिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।
बिहानैदेखि मदिरा सेवन गरी पुरुषहरू घरबाहिर गएर जुवातासमा व्यस्त हुँदा पारिवारिक वातावरण बिग्रिएको मेलौली नगरपालिका–९ विशालपुरकी राधा भट्टले बताइन् । गाउँ खुला दिसामुक्त भए जसरी मदिरामुक्त बनाएमात्रै आर्थिक अवस्था सुधार हुने महिलाहरूको धारणा छ । ‘सबै मिलेर गाउँ खुला दिसामुक्त गर्‍यौं, अब सीसीमुक्त नबनाई भएन,’ राधाले भनिन्, ‘घरमा छाक टार्न मुस्किल हुन्छ, दिनभर काम गरेको पैसा साँझ मदिरा खाएर सक्छन् ।’
शिवनाथ गाउँपालिकाले असोज १ देखि मदिरा निषेध क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सबै वडाबाट एउटै माग आएपछि गाउँ कार्यपालिकाले मदिरा निषेधको निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णसिंह साउदले बताए । स्थानीय विक्रेताहरू राजस्व तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको भन्दै बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका छन् । केही ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू नै मदिरा विक्रेता भएकाले दोहोरो निर्णयमा सहभागी भएका छन् । मेलौली नगरपालिकाले साँझ ५ बजेदेखि १० बजेसम्म बिक्री र सेवन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । गाउँका पसलमा जतिबेला पनि खुलेआम बिक्री भइरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
थप केही स्थानीय निर्वाचन २०७४बाट
कहाँ भए विस्फोट र झडप ?
डोल्पामा मतगणना सुरु, यस्तो छ पछिल्लो नतिजा
महिलाकै जिम्मामा मतदान केन्द्र
प्रदेश २ को सबै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक
बाराका सबै तहको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक